Fanelanelanana : Malok’ila ilay fihaonana an-tampon’ny Filoham-pirenena -
AccueilSongandinaFanelanelanana : Malok’ila ilay fihaonana an-tampon’ny Filoham-pirenena
Manjavozavo. Tontosaina eny amin’ny CCI Ivato ary hitohy anio ny hetsika fanelanelanana ataon’ny komitin’ny fampihavanana malagasy na ny CFM. Malok’ila ilay fihaonana an-tampon’ny filoham-pirenana nokarakarain’izy ireo, satria dia tsy tonga teny an-toerana ireo filoham-pirenena telo farany, dia ny Filoham-pirenena ankehitriny, Marc Ravalomanana ary Rajoelina. Solontena no nalefan’izy ireo teny hiatrika izany. Ny hany filoha teo aloha tonga teny an-toerana dia ny amiraly Didier Ratsiraka.
Tian’ny CFM asongadina amin’ity fihaonana an-tampon’ny Filoham-pirenena ity ny mahakasika ny lalàm-panorenana sy ilay didy navoakan’ny HCC ny 25 mey teo.
Tsy dia mahagaga loatra araka izany ny tsy fahatongavan’ireo Filoham-pirenena hafa satria fihaonana mety tsy ahitam-bahaolana ity karakarain’ny CFM ity. Antony, efa nisy ny didy navoakan’ny HCC mamaritra ny tokony ho tohin’ny raharaham-pirenena, ary ao anatin’izany ny famaritana ny maro an’isa eny amin’ny Antenimieram-pirenena, ka hanoloran’izy ireo ny anarana hofidian’ny filoham-pirenena iray praiminisitra afaka hiara-hiasa aminy.
Mbola hitohy anio izany fampihaonana ataon’ny CFM izany, ka ho hita eo izay ho tohiny.
Voatery nalain’ny miaramilan-dRanomasina Malagasy teny an-tanan’ilay olona naka sary ny sambo “Akio” ny fakan-tsariny, mba hamafana ny sary nalainy. Na dia efa norarana tsy haka sary aza mantsy io olona io, dia mbola nanao fanahy ...Tohiny